Orange - zvinobatsira zvivakwa, kurapwa, mabikirwo
Mhuri mhuri. Muti unogara uri wakasvibira muchero unodyarwa zvakanyanya munzvimbo dzinopisa uye dzinopisa.
Sweet orange yakataurwa muzvinyorwa zveChinese zvakatangira munenge muna 2200 BC. e. Chirimwa chakaunzwa kubva kuChina nemaArabu kuenda kuSyria neAfrica, uye muzana ramakore rechiXNUMX. yakatanga kuoneka muEurope. Panharaunda yeRussia, yekutanga greenhouses yakaonekwa pasi paPeter I padhuze neSt. MuCaucasus, orenji yakasimwa musango kubva kutanga kwezana ramakore rapfuura.
Orange mashizha mashizha akabatanidzwa, ane ganda, anotsanangurwa ne petioles. Maruva acho akajairwa, machena, asina kana ane mashoma maruva nhovo. Chibereko chacho chakaita denderedzwa kana orenji muvara.
Michero yeorenji ine shuga, citric acid, vhitamini C, pamwe nemavitamini P, A, boka B, pectin zvinhu, bioflavonoids, phytoncides, potasium, calcium, phosphorus, pigments, uye mafuta anokosha mumhodzi yemichero, maruva nemashizha .
Mukurapa kwechinyakare, varapi veChinese neTibetan vakashandisa muto weorenji kuporesa nekuisa hutachiona maronda nemaronda, uye doro tincture yema peel raishandiswa semushonga unorwisa febrile. Mvura decoction yemahwe, kunyanya emaorenji asina kuibva, - seystptic yekubuda ropa, pamwe nekuremerwa kuenda kumwedzi.
Maorange anoshandiswa semushonga wemultivitamin we hypo- uye avitaminosis, gout, hypertension, atherosclerosis, uye chirwere chechiropa. Jisi reorange rinomutsa chishuwo zvakanaka, rinopedza nyota, kunyanya patembiricha yemuviri yakakwira, fivha.
Muto zvakare unovandudza kugaya kwechikafu, asi haina kunyatsoshivirirwa nevarwere vane gastric ulcer uye neyakawedzera acidity yegastric muto.
Nekuda kwezvakanyanya zvemukati pectin zvinhu, michero yeorenji zvinokanganisa kubviswa kwezvinhu zvine chepfu kubva mumuviri, zvinokurudzira kubviswa kwemunyu wesimbi inorema uye radionuclides kubva mumuviri.
Orange muto - recipe
Orenji inoshambidzwa, kutemwa uye kusvinwa. Inoshandiswa sechizoro pamaronda, maronda maronda, mabhedha.
Orange peel tincture - recipe
Peel yeorenji, yakamboshambidzwa, inopwanywa uye inodururwa ne 70 ° doro, pahuremu hwehuremu hwe1: 10. Shingirira kwemasvondo maviri munzvimbo ine rima patembiricha yekamuri uye sefa. 2 teaspoon ye tincture inowedzerwa kune tii, kana paine feverish mamiriro ivo vanonwa katatu pazuva.
Orange peel decoction. Supuni yeakaomeswa orenji peel upfu inodururwa ne1 girazi remvura uye yakabikwa kweawa imwe nemaminitsi gumi nemashanu. Shingairira maminitsi makumi matatu. Ivo vari kusefa. Inwa kota yegirazi 1-15 kanomwe pazuva nekubuda ropa muchibereko kana kuenda kumwedzi kwakanyanya.
Michero yeorenji inoshandiswa zvakanyanya muchimiro chavo chechikafu senge dhizeti yekudya, pamwe nekuwana majusi, zvinwiwa, jamu, michero yakaomeswa Peel remuchero rinoshandiswa kuwana mafuta anonhuwirira akakosha, ayo anoshandiswa mukugadzira zvinwiwa, liqueurs, uye tinctures.
Jisi reorenji rine karoti uye mazambiringa akaomeswa. Orenji yakasvuurwa kubva kune iyo peel inotemwa kuita zvidimbu uye ndokudirwa nemvura, kuisa pamoto. Yakashambidzwa mazambiringa akaomeswa, makarotsi akachekwa, sinamoni uye kirimu zvinowedzerwa mumusanganiswa unovira, zvese zvakabikwa, uye ndokumanikidzwa kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu. Mwaka ne citric acid uye xylitol.
Orange - 100 g, mazambiringa akaomeswa - 10 g, sinamoni - 3 g, makarotsi - 30 g, kirimu - 20 g, citric acid - 1 g, xylitol - 7-10 g.
Orange chinwiwa pamwe manhanga, hazelnuts. Iwo manhanga akasvuurwa uye akachekwa kuita madiki machubhu, nzungu dzakasvuurwa dzinopwanywa, orenji rakakamurwa kuita zvidimbu, uye zest rakachekwa zvakanaka. Dzese dzinodururwa nemvura yakabikwa, uyezve inotonhorera uye yakarungwa neuchi.
Nhanga - 100 g, orenji - 100 g, uchi - 10 g, nzungu - 10 g, mvura yakabikwa - 550 ml.
Zvichava zvinonakidza kuverenga:
Dhadha mumuto weorenji: sarudzo yemabikirwo
Gourmet chinwiwa - orenji lemonade
Sisilia tsvuku machungwa: anobatsira zvinhu uye contraindication
Maitiro ekudhirowa orange: nhanho nhanho, nepenzura
Saladi ine orenji uye crab tumiti - zvekutanga mabikirwo
Posted in zvokudya uye kubika
Voeg kukanzura mhinduro
Yako email kero haisi kuzobudiswa. Raida minda anozivikanwa *
Iwe uri pamuchena mutsamba
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,476 masekondi.